Yemukati Zvikamu Fekitori - China Yemukati Zvikamu Zvigadzirwa, Vatengesi
YeMotokari kristaro yemukati multimedia control knob dhizaini Multifunction bhatani 5 akateedzana 7 akateedzana X1 X3 X5 Rotary Chinja che bmw
Crystal tanga bhatani. Yakareruka kuisa uye iyo chinhu ndeyekutanga uye abrasion inodzivirira. Yakatengwa zvinhu, electroplating maitiro. Ruvara rwekupenda ruri padyo nemota yekutanga. Zvakanakisa mhedzisiro mushure mekuvhenekera usiku. Mabhatani anonyatso kuoneka husiku, achiwedzera kubata kwekuona. Yakagadziriswa zvichibva pane yekutanga mota data. Kukwidziridzwa kwepamusoro. Hazvikanganisa kunzwisisika mushure mekuiswa.
Yepfupi akatungamira Gear Knob Led switch giya mapfundo akagadziridzwa e BMW x5 g05 i8 E36 E39 FandG chassis Leather hunhu hwekuchinja mubato
LED knob-cont lever.Shanduko iri nyore senge iyoyo. Ratidza chiratidzo mwenje Yekutanga color kuratidza. Kwete kungoparadza chete asiwo zvemukati, uchishandisa yekutanga LED mwenje. BMW OEM electroplating maitiro. Yekutanga mhando chrome yakavezwa yekushongedza tambo yeBMW, isina musono kubatana, hwakareba hupenyu, hunogara husina kubwinya Leather back rest, inzwa kugadzikana. Shanduko yega yega yakaita sekuzvibata pachako, kugadzikana kupfuura tsananguro. Kununura kwakarurama. Nakidzwa nekufamba.
Iyi yakasarudzika kristaro yekuchinja knob inotsiva yako iripo switch switch. Iyo crystal gear switch switch knob inogadzirwa neyakagadzirwa yedhaimani yakatemwa kristaro, yakafanana ne Swarovski crystal, yakafanana chaizvo negirazi rinodzora mudziyo wakasarudzwa nefekitori yeBMW. Iko kristaro yegear switch knob ine chinhu chinokwezva maziso, ichiva inoyevedza uye ine fashoni yepakati peiyo BMW yemukati. Iyo Crystal Gear Shift knob yakagadzirirwa ne "X" modhi logo, uye mwenje unovhenekerwa kubva pasi, ichiita kuti ive yakanyanya kunaka ...
Chigadzirwa chinoratidza: Tsananguro: Kubva paBMW 7 Series gearshift mubato wekuvhura muforoma, inoshanda kune 1 nhevedzano yemakamuri matatu, 2 akateedzana mafambiro, X1 uye X2. Zvinoenderana neyekutanga 1: 1 plug kugadzira uye slot 100% yakazara docking, uchishandisa BMW OEM electroplating maitiro uye BMW yepakutanga mhando chrome yekushongedza tambo, isina musono kubatana, hwakareba hupenyu, hwakareba gloss. Leather kumashure rutsigiro, inzwa wakasununguka, shanduko yega yega yakaita sekuzvibata pachako ...
Isu tinotora yekutanga mavara, giya rinoratidza chiratidzo mwenje, tichishandisa kristaro yeBMW yekutanga mhando chrome yekushongedza tambo. Zvese zvigadzirwa zvekugadzira kwedu nde1: 1 inogadzirwa zvinoenderana neyekutanga kugadzirwa kweBMW.
Electroplated inopenya cystal pfundo reBMW zvese zvakateedzana. Yakakwira standard electroplating maitiro ekudzoreredza yekutanga mota vara yekumisikidza haina kukanganisa kutenderera uye kiyi mashandisiro. Scartch Resistance uye pfeka Kuramba Mirror pamusoro pekurapa marara.special spraying tekinoroji inochengetedza yekutanga kunyorwa basa.